ဆွီဒင်ငွေကြေး | ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပို့ကုန်များအတွက်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဝယ်ဖို့ဆွီဒင် currency.net တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
ယာဉ်ငွေကြေး converter ကို
နေအိမ် ဆွီဒင်ငွေကြေး RSS
အဆိုပါဆွီဒင်ငွေကြေး(krona) နောက်ပိုင်းဆွီဒင်၏အကြွေစေ့ခဲ့ 1873. ဒါဟာဆွီဒင်အမျိုးသားဘဏ်အားဖြင့်ထုတ်ပေးသည်, Sveriges Riksbank. အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်, ထိုအကြွေစေ့အရေအတွက်သိပ်မဆှီဒငျပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည် (Krona ဆှီဒငျတွင်ဦးရစ်သရဖူဆိုလို). တစ်ခုမှာ Krona သို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ် 100 တစ်ပြားမှ. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အားလုံးသတ္တုရိုင်းဒင်္ဂါးပြားစက်တင်ဘာလ၏အဖြစ်ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည် 30, 2010. ထုတ်ကုန်များနေဆဲသတ္တုရိုင်းများတွင်ခန့်မှန်းခြေနေကြတယ်, ငွေနှင့်ပေးဆောင်ရသောအခါသို့သော်အားလုံးစုစုပေါငျးမြားအနီးဆုံး Krona မှချိန်ညှိနေကြတယ်. အသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်အခုအချိန်မှာဒင်္ဂါးပြားများမှာ 1 krona, နှင့်5နှင့် 10 သရဖူ. ငွေစက္ကူတွေ၏အမျိုးအစား၌ရှိကြ၏ 20, 50, 100, နှင့် 500 သရဖူ.
ဆွီဒင်ဘဝတစ်အကျိုးရှိလမ်းပြည့်စုံတော်မူပြီ, သောကွောငျ့အစွန်းပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြတ်တောက်၏, ကျယ်ပြန့်သည့်လူမှုရေးအကျိုးကျေးဇူးများ, တစ်ဦးခေတ်မီဖြန့်ဝေမူဘောင်, နှင့်တစ်ဦးအလှနျပါရမီအလုပ်အာဏာကို. အဆိုပါစီးပွားရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြင်ဘက်လဲလှယ်ဖို့တည်ရှိသည်, ကျွန်းသစ်တစ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေစိုက်စခန်းသုံးပြီး, ရေအားလျှပ်စစ်အာဏာကို, နှင့်သံသတ္တု. ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘဏ္ဍာရေးအရေးပေါ် 2008 ခအကျိုးစီးပွားနှင့်အသုံးချယုတ်လျော့, ၎င်း၏အစိုင်အခဲရန်ပုံငွေများနှင့်အခြေခံလိုအပ်သျောလညျးဆုတ်သို့လျှောဖို့ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့. အစိုင်အခဲထည်အရောင်းအပြန်နှစျတှငျအစိုင်အခဲတုံမှဆက်ပြောသည် 2010 သို့ 2011.
အဆိုပါဆွီဒင်ငွေကြေးအတွက်ပေးအပ်ခဲ့ 1873, အ Riksdalersgatan supplanting. အဆိုပါငွေသားနော်ဝေနှင့်ဒိန်းမတ်နှင့်အတူစကင်ဒီနေးငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ aftereffect အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့, ပထမကမ္ဘာစစ​​်သည်အထိမသွားစောင့်. အချိုမှုအောကျတှငျငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ပုံစံများကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအဆင့်အတန်းအောက်၌. အဆိုပါငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုထဲမှာပထမကမ္ဘာစစ​​်၏မီးတောက်-up ကအတူပြီးဆုံး 1914. ဆွီဒင်သြဂုတ်လအပေါ်အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့် level ကိုလက်နက်ချ 2, 1914, တစ်ခုနှင့်ပြောင်းလဲအလွယ်တကူပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်စေရန်စကေးမ​​ရှိဘဲပြည်ထောင်စုတခုအဆုံးမှာရောက်ရှိလာ.
bargain ခြင်းအားဖြင့်, ဆွီဒင်ယူရိုငွေကြေးအသုံးချဖို့ဖို့ယူရိုဇုန်နှင့်ဘာသာသှငျး join ဖို့လိုအပ်ပါသည်. က may ကဲ့သို့ဖြစ်, အများဆုံးဆွီဒင်နိုင်ငံသားအ coin.On စက်တင်ဘာလလက်ခံရရှိဆန့်ကျင်နေကြသည် 14, 2003, ယူရိုငွေကြေးလက်ခံရရှိငြင်းပယ်သောသူအထွက်ညှိမဲဆန္ဒရှင်ရာခိုင်နှုန်းငါးဆယ်ခြောက်ယောက်. တစ်ဦးလွတ်မြောက်အပိုဒ်အမြတ်ထုတ်, ဆွီဒင်အစိုးရ ERM II ကို join ဖို့မခူးခဲ့သည်, ယူရိုငွေကြေးလက်ခံရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်.
3 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ အားဖြင့် admin ရဲ့ 0
© 2019 ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပို့ကုန်များအတွက်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဝယ်ဖို့ဆွီဒင် currency.net တစ်ဦးကလမ်းညွှန်. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. ဆိုက်ကိုအဒ်မင် · entries RSS ကို · မှတ်ချက်များကို RSS
မှပံ့ပိုးသည် WordPress ကို · ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူမှာ theme Junkie